Ntuziaka maka Windows Server Asambodo: MCSA, MCSE na MTA | Ọ BỤ
2016 Windows Window
Strategic Service nke SSI (SS)
ITIL Nhazi Ọrụ (SD)
Mgbasa Ntugharị ITIL (ST)
Ọrụ ITIL (SO)
ITIL Ngalaba Nkebi
ITIL Expert (MALC)
Onye na-akwado Network Network (CND)
EC-Council akwụkwọ Secure Programmer (ECSP.net)
Onye na-enyocha onye na-agba ọsọ na kọntaktị na kọmputa (CHFI)
EC - Council Specialist Security Security (ECSS)
EC-Council Ederede Handler (ECIH)
EC-Council Specialist Encryption Specialist (ECES)
Onye na-ahụ maka Nchebe Ọkachamara nke EC-Council (C | CISO)
Akwụkwọ Enwere Kọmputa Kọmputa (CSCU)
CAST 612 Advanced Mobile Forensics and Security
CAST 613 Hacking na Ịmepụta Web App / Web Site
CAST 616 Na-echebe Windows Njirimara
BlueCat IPAM dị mkpa
Njikwa BlueCat Nche na nhazi di elu
ArcSight Logger nchịkwa na ọrụ
ArcSight ESM 6.9 Nchịkwa Nche
R80 Nlekọta Nche Nlekọta Point Point Point Control Point
Onye Nlekọta Nche Ụlọ Akwụkwọ Point Point (CCSE)
Cyberoam Akwadoro Network & Nche ọkachamara
Cyberoam Akwadoro Network & Security Professional (CCNSP)
Nchọpụta Deep Micro Deep
Ọdịdị Nche Ntaneti Trend Micro
AKỤKỌ AP-DATA Nchịkwa Nchịkwa
TRITON AP-EMAIL Nchịkwa Ọchịchị
Na-eme ka m
Ndị ọrụ nchịkwa mmadụ
Asambodo na Usoro Ọzụzụ Ọganihu (CATT)
Onye na-ahụ maka ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrịa uche (CPTP)
Nlekọta arụmọrụ & Onye Mmepụta Nghọta (CPCD)
Onye ọrụ akaebe mara ọrụ na nchịkọta mmadụ (CHAMP)
Onye nyocha nke mmezi ahazi (CODA)
Asambodo ndi nyocha akwukwo (CRA)
OD Intervention Professional OD (CODIP)
Onye Nlekọta Ihe Nleta Ihe Nlereanya (CBSCP)
Onye isi Executive & Life Coach (CELC)
Onye Mmekọrịta Business Business (CHRBP)
Onye Nhazi Ihe Ntuzi (CID)
Onye a na-amụrụ ihe na onye na-azụlite akwụkwọ (CLDM)
Mkpụrụ mmụọ JS
Mkpụrụ obi JS 1.5
Mkpụrụ obi JS 2.0
Mkpụrụ obi JS 4.0
Nbanye na Ule
Ihe nchekwa data HP
Ụzọ ndị ọzọ
Ndị na-emepụta ihe na AWS Training
AWS Nkà na ụzụ Ịkpa Ọzụzụ
Ịhazi Cisco Nexus 9000 na-agbanye na ọnọdụ ACI na v2.0
Ịhazi Cisco Nexus 9000 na NX-OS Mode (C9KNX)
Ntugharị CCNP & Nwegharị
Ejiri arụ ọrụ
Okwu Mmalite R maka Onye Mmemme
Selenium na mbụ epochs
Ọzụzụ nke ụlọọrụ
Ọzụzụ na-abịa abịa
Ụlọ Ọrụ Ọzụzụ
Nduzi mmalite nke Windows Server: MCSA, MCSE na MTA
SiteNchọpụta Ntanetị ọhụrụ
Nduzi maka Windows Server Asambodo MCSA MCSE na MTA
Ebumnuche site na njikwa jikwaa maka mmemme mmemme nke Microsoft usoro ntụziaka na usoro ọrụ. Isi ihe na-adọrọ mmasị bụ nkwekọrịta maka ịka mma. A ghaghị ịghọta na e nwere ọtụtụ asambodo Microsoft nke dị na ahịa. Nkwado Microsoft Office bụ maka ngwa yana desktọọpụ, ndị nhazi na ọdụ data.
Ntuziaka a maka akwụkwọ ikikere Microsoft niile mara gị MCSA asambodo, Ndepụta MCSE, MTA asambodo. A kwadoro mmemme mmemme ndị a maka Microsoft na afọ niile ma na-agbada elu dị ka akwụkwọ ikike dị oke aka. Microsoft na-eme ndị nchịkwa, ndị na-enyocha ìgwè na ndị na-akwado ọrụ n'elu ihe niile etinyere na ngwa ndị sitere na Microsoft.
N'ụzọ bụ isi, ị kwesịrị ịghọta na n'okpuru Nkwepụta MCP, akpọ MCSA, MCSE na akwụkwọ ikikere Specialist na-achọpụta. MOS na MTA endorsements anaghị aga n'okpuru MCP mkpado. Nwelite na enweghi ule a choro ka a choro ihe di mkpa maka iru eru maka ndi mmadu na ekwu banyere n'elu.
Ịghọta nyocha niile
Ihe nkesa Microsoft gụnyere gụnyere MTA, MCSE na MCSA nzere. N'ime MTA Server a na-abịa otu asambodo a na-akpọ IT Infrastructure. Iji nweta otu ihe ahụ, onye nwere olileanya kwesịrị ịgafe otu nyocha ise. Isi isiokwu na mpaghara ndị a dị ka ihe nchịkwa nchịkọta ihe nkesa, nhazi usoro, ntụgharị na ngwa, Ígwé ojii na nchekwa.
Site na MCSA Server, e nwere Windows 2008, 2012 na 2016 sava. Ihe egwu Windows Server a chọrọ nyocha atọ maka nke ọ bụla. Mee nke ahụ, ị ​​chọrọ naanị ule abụọ maka Linux na asambodo Azure na MCSA: Cloud Platform. Onye ọ bụla n'ime ha yiri ka ọ dị mkpa maka ọzọ. Usoro ntanetị Microsoft gụnyere MCSA, MTA na MCSE. Ebe nchekwa data MTA chọrọ otu ule. Maka MCSA database soro, ndị a bụ MCSA: SQL Server 2012 / 2014 na MCSA: SQL 2016. Ihe ndị a dị mkpa nyocha atọ.
The MCSA Desktọpụ gụnyere otu asambodo maka Windows 10 dị ka ekwuru na January 2017. Maka inweta MCSA: Windows 10 ị chọrọ ka ị gafee ule ole na ole.
MCSA Egwuregwu egwu gụnyere otu - iji kwuo kpọmkwem, MCSA: Office 365. A na-atụ anya nyocha ole na ole iji nweta nke a. Microsoft na-enye MOS Office 2016 maka ọ bụla Office Office. MOS 2016 ọkachamara mara ndị nwere oke aptitudes Office. Ndị asọmpi kwesịrị ikpochapụ ule anọ. MOS 2016 Nna-ukwu kwesịrị ịmepe ule isii.
Ihe nkwado Microsoft na-adabara maka ndị isi IT na-emepụta, nhazi, nhazi ma ọ bụ njikwa nke ọnọdụ Windows. Nke a nwere ike itinye kọmpụta ma ọ bụ ngwaọrụ. Ndị nwere MS na-ejuputa dị ka uru, isi, nyocha na ihe ndị ọzọ.
N'oge na-adịbeghị anya, MCSA asambodo, certification MCSE na MTA na-arịwanye elu nke ọma mara ihe na ike. Ndị na-achọ MCSA na-akwadebe ma ọ bụ MCSA na Ọzụzụ Microsoft na-ejikọta na nyiwe dịka Office 365, Office na Microsoft Dynamics 365.
Ruo March 31 afọ a, MCSE Server soro soro SharePoint, Nkwurịta Okwu, Ígwé ojii, Ígwé ojii Platform na Akụrụngwa, Izi ozi na Server Ihe Njirimara maka Ihe Njikwa Ihe Njikwa, Ihe Njiri na Desktọpụ na Ígwé ojii nke Ọchịchị na-egwu egwu ịkwesịrị igosi MCSA: 2012 Windows Server.
Maka Izi ozi, nkwurịta okwu na SharePoint nhazi ị ga-ewere MCSA maka asambodo Office 365. I kwesiri iru erughi ma eleghi anya ule di iche iche di iche iche maka imeri ihe ruru MCSE Server. MCSE Database track nwere atọ certs na-enye. Otu akwụkwọ na-adịbeghị anya bụ MCSE: Data Management na Analytics, ma abụọ mbụ bụ MCSE: Business Intelligence na MCSE: Data Platform. Ihe kachasị mkpa n'oge ọ bụla chọrọ mkpa anọ. Usoro nhazi oge ọzọ chọrọ nyocha ise. Ihe nzere abụọ gara aga wee laghachi azụ inye MCSE: Data Management na Analytics.
Ihe ntanetịime Microsoft na-eso MTA, ọkachamara Microsoft na MCSA certifications. Onye ọkachamara Microsoft na Windows 10 ga-atụ anya na onye ga-emecha nyocha. MTA Okpokoro Desktọụ nwere ihe nkwekọrịta naanị otu ihe gbasara IT. Nke a bụ otu MTA Server anyị nyochare tupu oge eruo. MTA IT Ngwurugwu ihe ndị dị mkpa ga-eme ka ị gafee otu ule nke ise n'ozuzu ya. Ihe nlele ndị ahụ bụ nchịkwa usoro, nhazi, nchịkọta Windows Server, njirimara, na igwe ojii na ihe mgbaru ọsọ.
Onye na-emepụta Microsoft na-esonyere MCSD na MTA. MTA Onye Mmepụta maara ndị nọ n'ọkwá dịka mmepe mmepe. Asambodo a choro mkpa iji nweta otu n'ime ule ato. Ebumnuche ndị nwere ike ịbụ HTML5 ngwa ngwa ọganihu ngwa ngwa, mmezi mmemme na mmemme ule.
Ụfọdụ Related Posts:
A Complete Guide ka MCSA 2016 Asambodo
MCSE Productivity Certification Course
Asambodo MCSE - All You Need To Know
Mgbapụta nke Nkwado Ntuzi Microsoft (Nne) Nkụzi Ọzụzụ
Ihe Microsoft Asambodo 10 kacha elu na-achọ taa na 2018
Na nso nso a
Ihe na12 Oct 2018
Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ ọhụrụ bụ ụlọ ọrụ nke na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ọrụ na kọleji na IT na nkà ọkachamara. E wezụga ịzụlite ya bụ ịnweta ụlọ ọzụzụ dị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ niile nke India maka mkpa ọzụzụ ụlọọrụ. GỤKWUO
Njikọ ndị bara uru
Bụrụ Onye Mmekọ
Ụmụ akwụkwọ a na-ahọpụta
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ
B 100 A, Obodo 1 nke dị na South, nso Ụlọ Nche, Gurgaon, HR, India - 122001
Copyright © 2017 - Ezigbo Akwụsị - Ngwọta Ngwọta Ndị Ọhụrụ | amụma nzuzo.